नेपालीहरूको आय पनि भारतीयको स्तरमा पु¥याउने हो ? - Online Majdoor
सन्दर्भ नेपाल आयल निगमले क्रमशः गरिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको हो । निगमले प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, एक रुपैयाँ गर्दै गरिरहेको मूल्यवृद्धि न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भन्नेजस्तो छ । यसरी हप्ता हप्तामा मूल्यवृद्धि गरेर निगमले उपभोक्तहरूको सङ्गठित विरोधलाई राम्ररी छलेको छ । फेरि पनि निगमले महिनामा करोडौंको घाटा देखाउन छोडेको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको महँगीको कुरा उठाउँदा निगमका अधिकारीहरू र सरकारका मानिसहरू भारतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई देखाउने गर्छन् । भारतको मूल्त्र्न्दा नेपालको मूल्य कम भएको र त्यसैका कारण नेपालबाट भारतमा पेट्रोल डिजेल तस्करी भइरहेको प्रसङ्ग तिनीहरू निकाल्छन् ।
हो, यतिखेर भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम छ । नेपालबाट भारतमा पेट्रोल र डिजेल तस्करी भइरहेको नहोला पनि भन्न सकिन्न । तर, मूल्यवृद्धिबाहेक पनि तस्करी रोक्ने अरू अनेक उपाय छन् । त्यसमा नेपाल सरकारले पटक्कै विचार गरेको छैन । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतसँग बराबरी गर्ने हो भने नेपाली जनताको आम्दानी पनि भारतीयहरूको स्तरमा पु¥याउनुपर्छ । भारतीय कर्मचारीहरूको तलब नेपालका कर्मचारीको भन्दा निकै बढी छ । भारतीय व्यापारीहरूको आम्दानी नेपाली व्यापारीको भन्दा धेरै छ । भारतमा कसैले १ सय रुपैयाँ कमाएमा त्यो नेपाली रुपैयाँ १६० हुन्छ । नेपालीहरूको आय पनि भारतीयको स्तरमा पु¥याउने हो ? फेरि भारतमै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको व्यापक विरोध भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो बनाएर सर्वसाधारण जनतालाई राहत दिनुको सट्टा भारत सरकार र नेपाल सरकारले भएभरको कर र विकास शुल्क पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमाथि थप्नु गलत हो ।
विद्यालय बन्द आवश्यक कदम
संसारलाई समस्यामा पार्दै जापान